Lixdan sano kadib Golaha Sare ee arrimaha Islaamka ee Itoobiya oo aqoonsi rasmi ka helay… – Hagaag.com
Lixdan sano kadib dalabkooda ahaa in sharci ahaan la aqoonsado ayaa Golaha Sare ee Arrimaha Islaamka ee Itoobiya wuxuu ka helay aqoonsi rasmi ah Golaha Wasiirada Ethiopia, kaas oo indha indheeyayaashu u arkeen guul aan horay loo arag.
Xafiiska Rai’isul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed wuxuu sheegay in golaha wasiirada ay si aqlabiyad ah u meel mariyeen sharci qabyo ah oo jimcihii si rasmi ah u aqoonsaday Golaha Sare ee Arimaha Islaamka, kaasi oo maamuli doona arimaha Muslimiinta ee wadanka.
Go’aanka ayaa yimid iyada oo laga jawaabayo dalabka Muslimiinta ee ah in ay helaan hay’ad sharci ah ee diimeed kaas oo abaabula noloshooda, fuliya shuruucda islaamka, oo dammaanad qaadaya xuquuqdooda ah in ay xiriir la yeeshaan hay’adaha diimeed ee kala duwan iyo bulshooyinka kale.
Golaha Sare ee Arimaha Islaamka wuxuu noqonayaa hay’ad diimeed dhameystiran oo islaam ah, oo soo saarta sharciyo la tacaamula arrimaha la xiriira barashada diinta iyo sameynta hay’ado xiriir la leh.
Bishii May ee la soo dhaafay, Muslimiinta Itoobiya waxay oggolaadeen in la sameeyo guddi aqoonyahanno ku-meel-gaar ah oo uu hoggaaminayo Muftiga waddanka, Sheekh Haji Cumar Idriis, si ay u maamulaan arrimaha Muslimiinta illaa dhisme cusub dib loogu dhisayo si loo sameeyo hay’ad islaami ah oo loo dhan yahay oo si rasmi ah u mataleysa Muslimiinta.
Codsigooda wuxuu ahaa in la helo oggolaansho sharciyeed hay’ad matalaysa iyaga, iyadoo la hubinayo madax-bannaanidooda, iyo in aan u adeegsanin dawladaha iman doona ujeeddooyin siyaasadeed.
Sheekh Haj Cumar Idriis, Muftiga Itoobiya iyo Guddoomiyaha Golaha Culimada, wuxuu la wareegay xilka madaxtinimada Golaha Sare ee Arrimaha Islaamka, heshiis taariikhi ah, ka dib markii khilaafyo farqaha goostay ka dhex aloosnaa qaybaha kala duwan ee bulshada Islaamka sannadihii la soo dhaafay.